श्री स्वस्थानी माताकाे दर्शन गरी हेर्नुस् माघ ४ गते मंगलबारकाे राशिफल - News 88 Post
वि.सं. २०७८ माघ ४ गते, मंगलबार तपाईको लागि कस्तो रहनेछ ? हेर्नुस् दैनिक राशिफल
मेष: आजको मंगलबारको दिन खुसीसाथ सुरु हुनेछ। परिवारसँग राम्रो समय बित्नेछ। नोकरीमा राम्रो आर्थिक लाभ हुनेछ, पदोन्नतिको संकेत मिल्नेछ। यसैबीच, व्यापारीहरूको लागि नाफाको अवस्था छ।
शुभ रंग : रातो
वृषः तपाईको मङ्गलबारको सम्पूर्ण दिन उत्साहपूर्ण रहनेछ। परिवारका सदस्यहरूसँग राम्रो समय बित्नेछ। काममा राम्रो धन प्राप्त हुनेछ। साथै, तपाईंको आर्थिक पक्ष बलियो हुनेछ। तपाईको दिन शुभ रहनेछ। तपाईको भाग्य पनि राम्रो रहनेछ ।
शुभ अंक : ७
मिथुन: यो मंगलबार कार्यक्षेत्रमा राम्रो सफलता मिल्नेछ। तपाईंको धन सही काममा खर्च हुनेछ। विद्यार्थीहरूले परीक्षामा राम्रो गर्नेछन् तर मनमा डर रहनेछ। यो मंगलबार कसैलाई ऋण नदिनुहोला । व्यापार र पैसाको लागि दिन मिश्रित रहनेछ।
कर्कट: मंगलबार भाग्यको पूर्ण सहयोग मिल्नेछ। नोकरीमा पदोन्नतिको सम्भावना छ र कार्यक्षेत्रमा लाभको स्थिति रहनेछ। परिवारमा केही शुभ कार्यक्रम हुनेछ जसमा तपाई सहभागी हुनुहुनेछ। तपाईको पूरा दिन रमाइलोमा बित्नेछ।
सिंह: आज मंगलबार तपाईको स्वास्थ्य बिग्रन सक्छ, जसका कारण तपाईले दिनभर बेचैनीमा बिताउनुहुनेछ। काममा कसैको सहयोगले लाभ मिल्नेछ । यसका साथसाथै तपाईले आफ्नो इच्छा अनुसारको कार्य योजना पूरा गर्नुहुनेछ।
शुभ रंग : पहेँलो
शुभ अंक : ९
कन्या: मंगलबार भाग्यको पूर्ण सहयोग मिल्नेछ। व्यापार व्यवसायका लागि दिन राम्रो रहनेछ । व्यापारी वर्गले विशेष गरी राम्रो प्रतिफल प्राप्त गर्नेछन्, जसका कारण धन लाभको योग हुनेछ । कार्यक्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन आउन सक्छ । परिवारको तर्फबाट चिन्तामुक्त रहनुहुनेछ।
शुभ रंग : निलो
तुला: तपाईले बेचैन महसुस गर्नुहुनेछ र तपाईको कमजोर स्वास्थ्य यस बेचैनीको कारण हुनेछ। यो मंगलबार विद्यार्थीको मन पढाइमा लाग्ने छैन । काम गर्ने व्यक्तिलाई काममा बाधा अड्चनले सताउनेछ। व्यापारी वर्गका लागि सामान्य अवस्था रहनेछ।
शुभ रंग: रातो
वृश्चिक: मङ्गलबार पैसा र धनको लागि धेरै महत्त्वपूर्ण हुनेछ। धन सम्वन्धी मामिलामा राम्रो हुनेछ । पुरानो साथीसँग कुराकानी हुन सक्छ। मंगलबार तपाईको मन प्रसन्न रहनेछ। तपाईको दिन खासै राम्रो रहनेछैन। कठिन परिस्थितिको सामना गर्नुपर्नेछ।
शुभ रंग: हरियो
धनु (धनु) : यो मंगलबार भाग्यको पूर्ण साथ नमिल्ने तर अदालतसँग सम्बन्धित कुनै मामिला भएमा त्यसमा केही राहत मिल्नेछ । तपाईको मानसिक सुस्ती समाप्त हुनेछ र तपाईलाई सबै पक्षबाट शुभ समाचार प्राप्त हुनेछ।
शुभ रंग: सेतो
मकर: मंगलबार तपाईले आफ्नो परिवारको हेरचाह गर्नुहुनेछ र उनीहरूको आवश्यकता पूरा गर्ने प्रयास गर्नुहुनेछ। तपाईंले आफ्नो व्यस्त तालिकाबाट परिवारका सदस्यहरूका लागि पनि समय निकाल्नुहुनेछ र उनीहरूसँग राम्रो समय बिताउनुहुनेछ। यसका साथै विद्यार्थीले परीक्षा आदिमा सफलता हात पार्ने देखिन्छ ।
शुभ रंग: बैजनी
कुम्भ: मङ्गलबार कार्य क्षेत्रमा लाभदायी साबित हुनेछ। सबैसँग मिठो व्यवहार हुनेछ। व्यापार व्यावसायमा लाभदायक स्थिति रहनेछ र मानिसबाट सम्मान प्राप्त हुनेछ। नोकरीमा उच्च अधिकारीबाट प्रशंसा पनि मिल्नेछ । पदोन्नति पनि हुन सक्छ।
मीन: मंगलबार तपाईले आफ्नो कार्यस्थलमा सबैसँग राम्रो व्यवहार गर्नुहुनेछ। समय समयमा सहकर्मीको सहयोग प्राप्त हुनेछ। राम्रो धन कमाउन सकिनेछ । साथै पारिवारिक सुख मिल्नेछ। छोराछोरीलाई ध्यान दिन आवश्यक छ।
शुभ अंक : ४
July 23, 2021 N88
ओलीसँग प्याचअप हुन लागेका माधव, देउवा र प्रचण्डसँग कोटेश्वरमा कानेखुसी गर्दै
एमसीसी सम्झौतालाई अघि बढाउन देउवा–प्रचण्ड सहमत, संसद बैठक बस्ने वित्तिकै पारित गर्ने तयारी